Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 06/11/2020)
Sug, waa maxay? Haa, waa run! Ugu wacan tahay wax loo yaqaan "Tareenadu habeen ee Europe"Safarka ah ku bixiya in ka badan 10 saacadood on tareen ka barta A hal dhibic B raaxaysan karaan faa'iido u ah saaran in Tareenadu habeen ee Europe iyo keydinta lacagta on qol hotel a. Waxaa jira dhawr nooc oo kala duwan oo fududeyn bixiyeen "tareenada habeen gudahood," loogu talagalay in ay ku haboon qof walba door bidaan safarka iyo miisaaniyadda. Sidaas, waxaan heysanaa:
Nope, you’re not dreaming – for the most part, baas rail Timid gunooyinka kaas oo noqon kara wax ka hadiyado yar yar sida raacid doon iyo basas lagu raro qiimo dhimista hoteelada iyo socdaalada socdaalka. Mararka qaar, xitaa waxaad ka heli kartaa abaal aad bixiya hawlaha gebi ahaanba bilaash ah oo ay ku jiraan lacag la'aan ah doonyaha webiga, cuntada, oo la mid ah.
waqti Next aad fikir labaad oo ku saabsan in la raacayso tareen - waxaan qabaa in jawaabtu waa cadeyd ... ma aha? Tag Save-A-tareenka inay jartaan aad u socoto ee 3 daqiiqo, at heerka ugu jaban iyo gargaartay ajuurada jaale isnacsiiyeen!